सानैमा बिहे भएपछि रोकिएको गित गाउने चाहाना पुरा गर्न खोज्दैछीन् पुष्पा ! यस्तो छ स्वर - Enepalese.com
सानैमा बिहे भएपछि रोकिएको गित गाउने चाहाना पुरा गर्न खोज्दैछीन् पुष्पा ! यस्तो छ स्वर
इनेप्लिज २०७५ चैत ३० गते ११:३६ मा प्रकाशित
कास्कीको लेखनाथकी पुष्पा सुनारको सानैमा बिहे भयो । उनका २ सन्तान छन् । सानैमा बिहे भएका कारण उनले आफ्नो चाहाना पुरा गर्न सकिनन् । सानै देखि लोक गित सुन्ने र गुनगुनाउने गर्थिन् उनी तर सानैमा बिहे भएपछि उनको त्यो चाहाना मनमा नै गुम्सिएको थियो । अहिले समय परिवर्तन भएको छ । परिवारका सदस्य बुझ्ने भएका छन् । उनले पनि आजकल गित गाउन थालेकी छन् । संगितको कक्षा पढ्न नपाएकी पुष्पाले साना साना केटाकेटीलाई आफै पढाउछीन् । उनि लेखनाथको एक स्कुलकी शिक्षिका हुन् । उनले अब संगित सिकेर आफु भित्र रहेको प्रतिभा देखाउने बताएकी छन् ।
हेर्नुहोस सानैमा बिहे भएर गित गाउने चाहाना पुरा गर्न नसकेकी पुष्पाको स्वर यस्तो छ ।